China Bandage mask muchina Mugadziri fekitori uye vagadziri | Kunyengera
Bhandige mask muchina Mugadziri
Otomatiki yekumhanyisa mhino p ...
Humidity chiratidzo kadhi murume ...
Yakaomeswa aruminiyamu foil bhegi ...
3 G 5 g 10 g 100 g silica d ...
Zvinhu zvenaironi Vacuum bhegi gwapa Trans ...
Bhandiji mask muchina chinhu chinosunga chinosunga michina yekuwisira ndege mask. Iyo inowanzo shandiswa kusungira kutenderera kweasina-yakarukwa ndege mask. Inogona kusungira bhandeji yemhando dzakasiyana dze mask mask. Izvo zvinonyanya kushanda kune inosunga iwelding ye2-layer isina-yakarukwa machira ndege mask, 3-layer isina-yakarukwa machira ndege mask, yekurapa ndege mask, 4-layer yakamisikidzwa kabhoni ndege mask uye anti-virus ndege mask.
Chibatanidzo chega chega chemidziyo yacho ine chishandiso chekuona chisinganzwisisike. Kana paine kukanganisa mukuita mashandiro, iyo sensor inozozviona yega uye alarm uye inomisa muchina. Panguva imwecheteyo, chinongedzo chinokonzereswa chinoratidzwa pane chishandiso kudzora kuratidza skrini, iyo inovandudza zvakanyanya kugona kwekugadzira.
Bhandeji mhando mask mask muchina unotora iyo ultrasonic yekutenderera nzira, uye irikupa mudziyo unoiswa pane muchina chikuva. Iyo semi-yakapera mask zvigadzirwa zvinotengeswa kubva kune inoendesa chishandiso, uyezve iyo bhandeji inodimburwa mushure mekutsimbirirwa neiyo ultrasonic ruva vhiri, kuti ibudise iyo yakapera zvigadzirwa. Munhu mumwechete chete ndiye anodiwa kuisa masiki-apera pabhandi rekutakura remuchina, uye rese basa rekutevera rinopera zvoga.
Kushanda magetsi 220 V
Equipment simba 3000W
Kushanda kushanda 25-30 mapiritsi / min
Saizi yemuchina 1920 (L) x 900 (W) x 1200 (H) mm
Kurema kwemuchina 300kg
1.The furemu chakagadzirwa aruminiyamu chiwanikwa uye Stainless simbi, inova yakajeka uye akanaka pasina ngura.
2. Kuverenga otomatiki kunogona kudzora zvinobudirira kugadzira nekufambira mberi.
3. Frequency shanduko yekudzora, iyo inogona kugadzirisa kumhanya kumhanya kwemidziyo zvinoenderana nezvinodiwa chaiko.
4. Dhonza dhiramu yekudyisa, kumisikidza kwakaringana, inogona kudzora hupamhi hwezvigadzirwa kusvika padiki uye chengetedza mutengo.
5. Kureba uye kukura kweakapedza zvigadzirwa zvinofanirwa kudzorwa zvakafanana, nekutsauka kwe ± 1 mm, iyo inogona kunyatso kudzora hurefu hweakapedza zvigadzirwa.
6. Midziyo yakanyatsogadzirwa uye inoda zvakaderera zvinodiwa kune vanoshanda, saka zvinongoda kuburitsa zvinhu uye kugadzirisa zvigadzirwa zvakapedzwa.
7. Yakagadzikana mashandiro uye nyore mashandiro.
8. Iyo otomatiki ultrasonic yekutenderera vhiri inogadzirwa neyakaunzwa yepamusoro simbi, ine hupenyu hwakareba hupenyu uye kupfeka kuramba.
Pashure: Humidity chiratidzo kadhi inogadzira yakagadziridzwa 6-poindi humidity kadhi kuchengetedza kwezvakatipoteredza
Zvadaro: Mukombe mhando, mukombe mhando semi-otomatiki maski muchina, semi-otomatiki mukombe mhando maski muchina
Imwe Dhonza Imwe Mask Machine
Imwe Dhonza Imwe Mask Machine, Anti Static Bubble Mucheka, Kavha Bubble Bhegi, Mutsvuku Wekutsvuka, Mask Mugadziri, Chiso Mask Machine,